I-Charming Bright & Airy Loft Studio! - I-Airbnb
I-Charming Bright & Airy Loft Studio!
Ierapetra, Crete, i-Greece
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Evi
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Evi izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Jabulela amaholide akho e-Ierapetra enhle kulesi situdiyo esisanda kwakhiwa esisanda kwakhiwa, esikhanyayo nesinomoya esivulekile esinophahla oluphezulu nokukhanya okumangalisayo, esilungele izithandani.
Ngokuhlanganisa ukhuni lwemvelo kanye nefenisha yesimanje nezitsha zobumba zasendaweni nemisebenzi yezandla, kuhlanganiswe nokukhanya kwemvelo nezindawo ezivulekile lesi situdiyo sinokubukeka kwemboni jikelele okunomuzwa othokomele nowasekhaya. Empeleni bekungumbazi iminyaka eminingi kwaze kwaba yilapho isanda kuguqulwa ibe isitudiyo esisendaweni evulekile.
Yonke into ekuleli fulethi yintsha sha, kusukela ezintweni zikagesi kuya kumatilasi, ilineni lombhede kanye nezinto zasekhishini.
Maphakathi nendawo yesitudiyo kunendawo ephakemeyo enombhede wabantu ababili, okungenwa kuyo kusuka ezitebhisini zokhuni. Kusukela ekamelweni lokulala kunombono we-studio yonke, kuhlanganise ne-patio nengadi ngemuva, kanye ne-patio ngaphambili. Njengoba ungena estudiyo kunendawo yokudlela enetafula nezihlalo lapho ungajabulela khona ikhofi nokudla okumnandi. Emuva, kunekhishi elivulekile, elihlome ngokugcwele ngakho konke oyokudinga ukuze ulungise ukudla kwakho okuhlanganisa isiqandisi esincane, uhhavini, izitofu zikagesi, i-toaster, iketela, umshini wekhofi, amabhodwe namapani. Eduze kwekhishi futhi okubheke kuvulandi kunegumbi lokuhlala elinombhede kasofa ongahlalisa izivakashi ezimbili. Kukhona nendawo yehhovisi enedeski kanye ne-WiFi yamahhala uma kwenzeka udinga ukwenza umsebenzi othile. Igumbi lokugezela elineshawa liphinde libe sezingeni eliphezulu futhi linomshini wokuwasha. Umbhede owodwa owengeziwe unganikezwa uma uceliwe. Ngemuva kwe-studio kukhona i-patio encane enetafula lapho ungakhululeka khona futhi ujabulele isidlo sakusihlwa ngemva kosuku olude ogwini.
Isitudiyo futhi sinendawo yokugcina okuningi, kufaka phakathi amakhabethe amabili namashalofu amayunithi wezinto zakho zomuntu siqu.
ubusuku obungu-7 e- Ierapetra
Itholakala endaweni ethule eyimizuzu emi-3 nje yokuhamba ibanga ukuya emakethe enkulu eseduze, imizuzu emi-4 ibanga lokuya ezitolo kanye nesikwele esimaphakathi kanye nemizuzu eyi-6 kuphela ngezinyawo ukuya ogwini nasethekwini lapho ungathatha khona isikebhe uye eChrissi. isiqhingi, indawo ekhangayo ongafanele uyiphuthelwe
Ngizoba khona ngesikhathi uhlala ngakho ngizotholakala ukuze ngikusize kukho konke okudingayo!
Inombolo yepholisi: 00000052230
Hlola ezinye izinketho ezise- Ierapetra namaphethelo